HomeWararka MaantaRonaldinho Oo Musalafay Gurigiisiina Ku Kireeyey £9,000 Habeenkii
Kadib markii uu ka reebay tababare Luiz Felipe Scolari, xulka Brazil ee ka qayb gallaya ciyaaraha koobka aduunka, laacibkii hore ee kooxda Barcelona Ronaldinho ayaa ku dhaqaaqay talaabo uu ku raadinayo meel kale oo uu dakhli ka helli karo si uu noloshiisa u dabaro.
Ronaldinho ayaa go’aan saday inuu kireeyo qasriga uu ku leeyahay magaalada Rio de Janeiro, waxaana lagaga kiraystay lacag dhan £9,120 (sagaal kun boqol iyo labaatan giniga Ingiriiska ah) habeenkiiba, taas oo cida kiraysanaysaa ugu tallo galleon inay seexiyaan taageerayaasha dacalada dunida isaga kala imanaya si ay ugu raaxaystaan.
Ronaldinho ayaa barta uu ku leeyahay shabakada bulshada ee Twitter ku xaqiijiyey in qasrigiisa ka kooban shanta qol ee hurdada ah, isagoo kiro ah laga helli karo dalabkana lagu soo hagaajin karo , shabakada Airbnb.com.
Xidiga kooxda Atletico Mineiro ayaa ku qoray bartiisa Twitter sidan: ‘Waxay ku socotaa qof kasta oo shaki kaga jiro inaan kiraynayo gurigayga oo laga helli karo Airbnb! raaxaysta #CasaR10’
Qasriga Ronaldinho, oo sidoo kale leh lix musqulaha maydhiga ah ‘six bathrooms’, ayaa ah dhisme gaydh ama dayr balaadhan leh oo ku yaala xaafada Barra da Tijuca ee magaalada Rio.